Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Austria na -agbasa ozi ọma » Austria: Enweghị ndị gbara ọsọ ndụ Afghanistan chọrọ!
Akụkọ na -agbasa ozi na Afghanistan • Airlines • Airport • Austria na -agbasa ozi ọma • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • culinary • omenala • Education • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Onye isi ala Austria Sebastian Kurz
Nsogbu a bụ na “mwekota nke ndị Afghanistan siri ike” ma chọọ nnukwu mbọ Austria enweghị ike ị nweta ugbu a, Kurz kwuru. Ha na -enwekarị agụmakwụkwọ dị ala na ụkpụrụ dị iche kpamkpam ma e jiri ya tụnyere ndị bi na mba ndị ọzọ, ọ rụtụrụ aka, na -agbakwụnye na ihe karịrị ọkara ndị Afghanistan na -eto eto bi n'Austria kwadoro ime ihe ike okpukpe.
Austria achọghị ka ndị Afghanistan gbara ọsọ ndụ ọzọ.
Ntinye nke ndị Afghanistan na ọha ndị ọdịda anyanwụ “siri ezigbo ike”.
Austria enwelarị obodo nke anọ kachasị na Afghanistan na ụwa.
Ihe karịrị ndị nkịtị 123,000 ndị US na ndị otu ọdịda anyanwụ gbapụrụ na Kabul mgbe isi obodo Afghanistan dabara n'aka ndị na-eyi ọha egwu Taliban n'etiti etiti August.
A ga -enye ihe ka ọtụtụ n'ime ndị gbara ọsọ ndụ Afghanistan ahụ mgbapu na USA, mana European Union kwenyekwara ịnakwere 30,000 ndị Afghanistan na -agba ọsọ.
Ọ bụ ezie na Germany na France gosipụtara ịnụ ọkụ n'obi ịnabata ndị gbara ọsọ ndụ, Austria so na mba ndị jụrụ echiche nke ndị mbata Afghanistan ọzọ.
Onye isi ala Austria Sebastian Kurz kwupụtara na Austria enwelarị ndị na -akwaga mba ọzọ Afghanistan, na mba ahụ agaghị etinye aka na nbughari nke ndị gbara ọsọ ndụ Afghanistan hapụrụ Kabul mgbe ndị Taliban weghachisịrị.
Sebastian Kurz kwupụtara na mkparịta ụka taa ya na akwụkwọ akụkọ La Stampa nke Italiantali, "Anyị agaghị anabata ndị Afghanistan ọ bụla na -agba ọsọ n'ime obodo anyị.
Kurz siri ọnwụ na ọnọdụ gọọmentị Ọstrịa n'okwu a bụ "ezigbo" na ọ pụtaghị na enweghị nkwado na isi obodo EU n'akụkụ Vienna.
“Mgbe ihe karịrị ndị Afghans 44,000 bịarutere obodo anyị n'afọ ndị na -adịbeghị anya, Austria na -akwadorịrị obodo nke anọ kachasị na Afghanistan na ụwa”, onye isi otu ahụ chetara.
Nsogbu a bụ na “mwekota nke ndị Afghanistan siri ike” ma chọọ nnukwu mbọ Austria agaghị enwe ike ugbu a, onye ndọrọndọrọ ọchịchị dị afọ 35 kwuru. Ha na -enwekarị agụmakwụkwọ dị ala na ụkpụrụ dị iche kpamkpam ma e jiri ya tụnyere ndị bi na mba ndị ọzọ, ọ rụtụrụ aka, na -agbakwụnye na ihe karịrị ọkara ndị Afghanistan na -eto eto bi n'Austria kwadoro ime ihe ike okpukpe.
Vienna ka na -achọkwa inyere ndị Afghanistan nwere nkụda mmụọ aka, ebe ọ na -ekenye nde euro 20 iji nyere mba ndị agbata obi Afghanistan aka ịtọgharị ndị gbara ọsọ ndụ, Kurz kwuru.
Ma European Union atumatu sitere n'oge nsogbu ndị na -akwaga mba ọzọ na 2015 - mgbe ọtụtụ narị puku ndị mmadụ na -agbapụ ọgba aghara na North Africa na Middle East ka ha banye na mgbochi - “enweghị ike ịbụ ihe ngwọta maka Kabul ma ọ bụ European Union” ọzọ, Kurz kwuru. .
Onye isi obodo Ọstrịa kwusiri ike na "ugbu a ka gọọmentị mba Europe niile mara na ekwesịrị ịlụso mbata na ọpụpụ na -akwadoghị iwu na ekwesịrị idobe oke mpụga Europe" iji dozie nsogbu a.
Sebastian Kurz kwenyere na European Union ga -agba mbọ mebie “usoro azụmaahịa” nke ndị na -ere ahịa mmadụ na -ebuga ndị mmadụ na Europe. Banyere ndị na-akwaga mba ọzọ, ekwesịrị ịtụgharị ha na ókèala EU wee zighachi ha na mba ha siri bịa ma ọ bụ na mba ndị ọzọ nwere nchekwa.